Waa tee Kooxda Real Madrid ka afduubanaysa Erling Braut Haaland? – Gool FM
(Madrid) 25 Maajo 2020. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa la soo warinayaa inay indhaha ku haysao inay Real Madrid ka afduubato ciyaaryahanka Erling Braut Haaland, iyadoo doonaysa inay u dhaqaaqdo soo xero-gelinta xiddiga weerarka uga ciyaara naadiga Borussia Dortmund.
Kooxda reer Talyaani ayaa la filayaa inay dib u dhigto weerarkeeda ka hor xilli ciyaareedka soo socda marka laga reebo Cristiano Ronaldo oo wali sii ahaan doona booska koowaad.
Warsidaha Tuttosport ayaa warinaya in Juve ay u dhaxeyso inay u dhaqaaqeyso Arkadiusz Milik, Raul Jimenez, Mauro Icardi ama Gabriel Jesus xagaagan.
Isla warbixinta ayaa muujineysa in ikhtiyaar kale uu haatan miiska saaran yahay, iyadoo Bianconeri ay dareensan tahay inay booska adag kaga jiraan tartanka ay Haaland uga soo kaxaysanayaan Dortmund.
Haaland ayaa la rumeysan yahay inay ugu sareyso liiska xiddigaha ay suuqa kala iibsiga ka doonayso Real Madrid, inkastoo wiilasha Zinedine Zidane ay dib u dhigi karaan u dhaqaaqista ilaa sanadka 2021-ka, markaasoo 75.5 milyan oo gini ah oo u dhiganta 67.16 milyan oo dollar ay noqonayso lacagta lagu burburin karo qandaraaskiisa.
Kooxda Juventus ayaa dhalisay 50 gool xagaagan horyaalka Serie A – waana in 20 ka yar goolasha ay dhalisay Atalanta, halka 10 ay ka hooseyso goolasha ay dhalisay Kooxda booska labaad horyaalka kaga jirta ee Lazio.